Izimo zezulu ezimbi kakhulu ezizokumangaza | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izimo zezulu ezimbi kakhulu ezizokumangaza
Kwiplanethi yethu kunezehlakalo zezulu ezimbi kakhulu ezike zangena emlandweni. Izimvula ezinkulu, iziphepho, iziphepho, ama-tsunami, njll. Imvelo ayiyeki ukusimangaza futhi isibonise amandla nobudlova engaba nakho. Izithombe zemvula nezinhlekelele zemvelo yilokho esizokubona namhlanje kulokhu okuthunyelwe.
Uma ufuna ukwazi ukuthi iziphi izehlakalo ezimbi kakhulu ezenzeke emhlabeni, qhubeka ufunda 🙂
1 Izimo zezulu ezimbi kakhulu
2 Ukwehla okubandayo eLevante eSpain
3 ITornado Alley e-United States
4 Isiphepho eNdiya
5 Indawo eshisayo emhlabeni, ugwadule i-Atacama
6 Iziphepho zeqhwa eGreat Lakes e-United States
7 Iziphepho eziningi ezinesihluku neziphepho
8 Imimoya yeKatabatic namakhaza abandayo
9 ISiphepho eSahara nase-United States
Izimo zezulu ezimbi kakhulu
Izimo zezulu ezimbi kakhulu yilezo ezidlula umfutho maqondana nokujwayelekile. Ngamanye amagama, isiphepho esinesigaba esiphakeme kakhulu sithathwa njengesimo sezulu esibi ngokweqile. Uma lokhu kwenzeka, ngokujwayelekile, amashwa avela avela kumthelela abanayo ezintweni eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, zithinta kakhulu imvelo kanye nempahla ebonakalayo.
Ngokulandelayo sizobona uhlu lwezimo ezimbi kakhulu zezulu ezenzekile emhlabeni.
Ukwehla okubandayo eLevante eSpain
Lesi simo senzeke lapho inqwaba ebandayo ishayisana nemimoya yasempumalanga eyayilayishwe umswakama phezu kweMedithera. IMedithera yayifudumala ekwindla, ngemuva kokuthola konke ukushisa okuvela emazingeni okushisa aphezulu ehlobo. Ngakho-ke, kwenzeka esinye sezimo ezibhubhisa kakhulu ezweni lethu.
Kwakunezimvula ezinkulu zalesi sigaba, ezidala izikhukhula ezindaweni eziningi. Izimvula ezithi zazakhiwe kakhulu futhi zaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi.
ITornado Alley e-United States
I-United States iyindawo lapho izivunguvungu zenzeka kaningi. Lezi zimo ziyakwazi ukubhubhisa konke okusendleleni yazo, kepha ngaphandle kokulimaza kakhulu izakhiwo ezitholakala eduze kwaso. Ngokungafani nesiphepho esonakalisa yonke into, indawo yesiphepho incane.
Kulabo bazingeli besiphepho abazinikele ekutadisheni kwabo ngokujula, isiphepho i-Alley, sasingenye yezinto ezazifunwa kakhulu. Kwenzeka ezifundeni zaseTexas, e-Oklahoma, e-Arkansas nakwezinye izifunda eziseMidwest. Isiphepho imvamisa iba nesilinganiso sokufa esingu-2% kuphela. Kodwa-ke, minyaka yonke kunabantu abaningi abafayo ngezindleko zomonakalo odalekile kanye nokucekelwa phansi kwawo.
I-India yindawo lapho imvula yangehlobo neyentwasahlobo igcwele khona. Ekupheleni kukaMeyi, umsinga womoya obizwa ngokuthi yi-jet owenzeka ezingxenyeni ezingenhla zomkhathi, uvela entshonalanga futhi unesibopho sokulawula amazinga okushisa emathafeni aseGanges ebusika. Lokhu kwamanje kudilika ngokucijile ekupheleni kukaMeyi bese kuya ngaseningizimu kuya eBengal bese kubuya futhi. Lokhu kubangela izimvula ezinkulu eHimalaya bese kuthi naseNtshonalanga, kusabalale izwe lonke.
Lo mcimbi ungahlukaniswa njengokwehla okubandayo, kepha indawo ethinta yona inkulu kakhulu. Ukwehla kwamakhaza ngokuvamile kuthinta izindawo ezithile futhi, njengoba kuyizimvula eziqhubekayo, ziyakwazi ukubangela izikhukhula ezinkulu ngokulahleka kwempahla ebonakalayo.
Indawo eshisayo emhlabeni, ugwadule i-Atacama
Epulatifomu lezingwadule ezishisa kakhulu emhlabeni, uzothola Ugwadule lwase-Atacama. Kuyaziwa ukuthi ogwadule imvula incane kakhulu futhi amazinga okushisa aphezulu kakhulu emini naphansi kakhulu ebusuku.
Nokho, ngemvula engu-0,1 mm kuphela ngonyaka, yihlane lase-Atacama. Isimo sezulu saleli hlane sibonakala ngemisebe yelanga eqinile ebhekiswe kuyo nokukhishwa ebusuku kwemisebe ye-infrared ebusweni. Ngenxa yale micimbi, kunegebe elikhulu phakathi kwamazinga okushisa emini nasebusuku.
Ngenxa yokuthi imvula incane kakhulu, kule ndawo ukukhula kwezimila akunakwenzeka.
Iziphepho zeqhwa eGreat Lakes e-United States
Imimoya enamandla efika namazinga okushisa aphansi kakhulu avela enyakatho ilayishwa umswakama njengoba kudlula amaLwandle Amakhulu. Lapho zishayisana nogu lokuqala oluseningizimu, zibangela esinye sezimo eziyingozi kakhulu emhlabeni, izivunguvungu zeqhwa.
Cabanga umoya olayishwe umswakama, onamazinga okushisa aphansi kakhulu kangangokuba amaconsi amanzi atholakala ebangeni lasemoyeni afriziwe. Lapho lezi zivunguvungu zeqhwa zenzeka, ingqalasizinda ilimala kakhulu, ikakhulukazi ikhebula lenethiwekhi kagesi. Iqhwa lifaka kwingqalasizinda futhi isikhathi ngasinye liqoqa isisindo esikhulu. Izintambo zikagesi zihamba ngaphansi kwesisindo futhi kunamandla amakhulu kagesi ezindaweni eziningi.
Iziphepho eziningi ezinesihluku neziphepho
Iziphepho neziphepho kuyizenzakalo ezimbi kakhulu zemvelo futhi hhayi ngenxa yokuqina kwayo, kodwa ngenxa yobukhulu bayo namandla okwenza umonakalo. Iziphepho neziphepho ezaziwa kakhulu kuze kube manje yilezo ezenzeke eGulf of Mexico, eCuba, eHaiti, eDominican Republic, eFlorida, eMexico, eMelika Ephakathi, e-United States, oLwandle lweCaribbean nase-Asia (Taiwan, Japan naseChina).
Isiphepho singathwala inqwaba yeziphepho, ngakho-ke amandla aso okubhubhisa anonya. Ingxenye eyingozi kakhulu yesiphepho ukuqhuma kwesiphepho. Lokho wukuthi, ikholomu enkulu yamanzi asolwandle aqhutshwa umoya futhi akwazi ukugcwala ugu lapho isiphepho singena ezwenikazi.
Uma isiphepho sifika emhlabeni futhi igagasi liphansi, izinga lamanzi liyakwazi ukukhuphuka lifike kumamitha ayisithupha eduze nogu, okuholele ekutheni amagagasi aze afike kumamitha ayi-18 ukuphakama. Ngakho-ke, izivunguvungu zibhekwa njengezimo zezulu ezimbi kakhulu ezilimaza kakhulu.
Imimoya yeKatabatic namakhaza abandayo
Indawo ebanda kunazo zonke emlandweni yiVostok. Kule ndawo kunamazinga okushisa aphakathi kuka -60 degrees futhi kwafinyelelwa bhalisa -89,3 degrees. Ngakho-ke, impilo ayikwazi ukukhula kule ndawo. Imimoya yeKatabatic yinto eyenzeka esimweni sezulu sase-Antarctic. Le yimimoya edalwa ukupholisa kwenqwaba yomoya lapho ihlangana neqhwa. Imimoya isezingeni eliphansi futhi iyakwazi ukufinyelela ngesivinini esifinyelela ku-150km / h futhi ihlala izinsuku ezimbalwa.
ISiphepho eSahara nase-United States
Iziphepho Zesihlabathi bayakwazi ukunciphisa ukubonakala ngisho nangaphezu kwenkungu. Lokhu kwenza ukuthuthwa nokuhamba kungenzeki. Uthuli olunesiphepho sesihlabathi luhamba izinkulungwane zamakhilomitha futhi luthinta ukukhula kweplankton entshonalanga ye-Atlantic Ocean, njengoba kungumthombo wamaminerali ayindlala ezitshalweni.
Ngiyethemba umangazwe yimicimbi imvelo ekwazi ukusikhombisa yona. Ngakho-ke, kuyadingeka ukwazi kahle lapho siya khona, ukwazi ukuthi ungaziphatha kanjani lapho ubhekene nalolu hlobo lwezehlakalo ezimbi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izimo zezulu ezimbi kakhulu ezizokumangaza
Kuhle, okuthunyelwe okuhle, ngiyazithanda kakhulu izenzakalo zemvelo, ziyamangalisa. Ingxenye embi imiphumela yayo nemiphumela. Isibonelo, ukuqhuma kwe-limnic kuvame ukunganakwa, akwenzeki kaningi kepha ukuminyana okudala kungabulala izinkulungwane zabantu.
Kuwebhusayithi yami ngine-athikili ebhekiswe kulezi zimo
Kuyini futhi kwakhiwa kanjani ama-guyots?
Ummango wase-Oceanic: imvelaphi, izici namandla